နေအိမ် | Hongsheng Printing
HS သည် 2002 ခုနှစ်မှစ. ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးထားသောစိတ်ကြိုက်0န်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
စက္ကူ Box ကိုထုပ်ပိုး
18 နှစ် Professional ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူ
ကုန်ပစ္စည်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းကိုသင်၏အမှတ်တံဆိပ်ပုံသို့ထူးခြားသည့်အထုပ်တစ်ခု ဖန်တီး. သင်၏ထုတ်ကုန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုမြှင့်တင်ပါ။ HS Boardgame Printing ကုမ္ပဏီသည်အတွေ့အကြုံရှိထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းအဖွဲ့ 40 ကျော်ရှိပြီး 10 နှစ်ကျော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်အပြင်, ဂျာမနီ, နိုင်ငံများ, ဒီဇိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
Hongsheng သည်အကောင်းဆုံးစိတ်ကြိုက်ကဒ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံရှိစိတ်ကြိုက်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အဖြစ်အဓိကအားဖြင့်ဘုတ်ဂိမ်းပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အဖြစ်အဓိကအားဖြင့်ဘုတ်ဂိမ်းပုံနှိပ်ခြင်း, ရုပ်ပုံစာအုပ်ပုံနှိပ်ခြင်း, သုံးဖက်မြင်စာအုပ်ပုံနှိပ်ခြင်း, သင်ကြားရေးအထောက်အကူများ, Printed ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဖောက်သည်များအားပေးရန် Project Boxes စသည်တို့ကိုအဆုံးသတ်ပါ။
2002 ခုနှစ်မှစ. တိုက်ရိုက်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM / ODM ထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့သူနှင့်တင်ပို့သူအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံရှိတရုတ်နိုင်ငံရှိတရုတ်နိုင်ငံရှိ Hongsheng Dountry, ကဒ်ဂိမ်းများ, ကဒ်ဂိမ်းများ, ကဒ်များ,
Hongsheng Printing စိတ်ကြိုက်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုတရုတ်မှ
တရုတ်မှ Playing Card Playing Cards Plunting Cards Printing Cards
Hongsheng Printing စိတ်ကြိုက်ကစားခြင်းကဒ်များကိုတရုတ်မှပုံနှိပ်ခြင်းကဒ်များပုံနှိပ်စက်များ
Hongsheng Printing အကောင်းဆုံးအလောင်စုတ်ဆွဲပေးသွင်းသူပေးသွင်း
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံရှိသောထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းအဖွဲ့ 40 ကျော်နှင့် 10 နှစ်ကျော်စက်မှုအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစေ။ ကျနော်တို့အတူတူဖြစ်ဖို့ငြင်းဆန်။
ထုတ်ကုန်များကိုဂျပန်, ဂျာမနီ, အမေရိကန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများ၌ကောင်းစွာရောင်းချကြပြီးဒီဇိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
စိတ်ကြိုက်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းကဒ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းတို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု 19 နှစ်တာကာလအတွင်းဂျပန်ပညာရေးကစားစရာကုမ္ပဏီသည်မိတ်ဖက်တစ် ဦး အားသတ်မှတ်ထားသည်။ Dongguan ဌာနချုပ်တွင်အင်အားကြီးမားသောစက်ရုံအဆောက်အအုံများနှင့်ကျွမ်းကျင်သောစက်ရုံအဆောက်အအုံများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ0န်ထမ်း 300 ကျော်ရှိသည်။ 2017 ခုနှစ်, စက်တင်ဘာလတွင်စတုရန်းမီတာပေါင်း 20000 ကျော်ရှိသော huizhou ဌာနခွဲကိုတရားဝင်ခွဲစိတ်ကုသမှုသို့တရားဝင်ခွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုမှုလုပ်ငန်းနှင့်ကိုက်ညီသော "Guangzhou ခရိုင် (Guangzhou ခရိုင်) ဖြစ်သော" Guangzhou ခရိုင်ဆု "ဖြစ်သော" Guangzhou ခရိုင်တဆယ်ရှိဆုကျေးဇူး "ဖြစ်သော" Guangzhou ခရိုင်ဆု "ဖြစ်သော" Guangzhou ခရိုင်ဆု "ဖြစ်သော" Guangzhou ခရိုင်ဆု "စသည့်" Guangzhou ခရိုင်ဆု "စသည့်" Guangzhou ခရိုင်ဆု "စသည့်" Guangzhou ခရိုင်မှဆုချီးမြှင့်ခြင်းလက်မှတ် "ကဲ့သို့သောဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
2001 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ပြီးကတည်းက HS Boardgame Printing Computing Company သည် "ဖောက်သည်ပထမ ဦး စွာပထမ ဦး စွာ" ဖောက်သည်ပထမ ဦး စွာ "ဖောက်သည်ပထမ ဦး ဆုံး tenet အပေါ်အခြေခံသည်။ ထူးချွန်, စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု။ " စျေးကွက်ပေါ် မူတည်. ၎င်းသည်ဖောက်သည်များ၏ဘဝလမ်းစဉ်မှဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ 2009 ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုမှုကို 2009 ခုနှစ်တွင်ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးရှိသောစနစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ 2017 ခုနှစ်တွင် Huizhou ရှိဌာနခွဲတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန် 2010 ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတည်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် စတုရန်းမီတာရှိပြီးလက်ရှိတွင်0န်ထမ်း 600 ခန့်ရှိပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 300 ခန့်ရှိသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းစီးပွားရေးဌာန, ကလေးများပညာရေးဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်ကစားစရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဦး စီးဌာန, BEUTIOG Packaging Business ဌာန။
Printing စီးပွားရေးနယ်ပယ် - ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများ, ရုပ်ပုံများ, ရုပ်ပုံစာအုပ်များ, ရှုထောင့်သုံးဖက်မြင်စာအုပ်များ, ကလေးများ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်ကစားစရာများ, သင်ကြားရေးအထောက်အကူများ, ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ - Heidelberg Printing Machine, Polishing Machine, Beer Machine, Beer Machine, Intection Machine Machine, Blister စက်, ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်, ခေါက်, ခေါက်ခြင်းစက်, ဖောက်သည်များ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။
သင်၏အီးမေးလ် (သို့) ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ရန်ပုံစံဖြင့်သာထားခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးအတွက်အခမဲ့ကိုးကားချက်ကိုပေးပို့နိုင်သည်။